Himalaya Dainik » महिलाले याै’नसम्प’र्क किन गर्छन् ? केहि आ’श्चर्यजनक कारण !
महिलाले पुरु’षसँग स-म्भो’ग किन ग’र्छन् ? आफ्नो वैवाहिक जिवनलाई शान्त पार्न वा टिकाउन या विनाकारणको टा’उको दु-खाइ बाट मु’क्ति पाउन । महिलाहरुका लागि स-म्भोगको कारणमा रो’मान्स तथा आ-नन्द र इ’च्छा निकै पछाडि पर्दछन् । धेरैलाई आ’श्चर्य लाग्न सक्छ ।
अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयका मनोविज्ञान विषयका प्राध्यापक सिन्डी मेस्टन र डेभिड बोसले लेखेको किताब ‘ह्वाइ वुमन ह्याभ से’क्स’ मा झण्डै २ सय कारणहरुलाई हाइलाइट गरिएको छ । यो किताब लेख्ने क्रममा शेाधकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एक महिलाले यो सम्म स्विकार गरेकी छिन् की उनले यसकारण से’क्स गर्छिन् ता की उनको श्रीमानले आफ्नो वि-र्य बाहिर नि’काल्न पाओस् ।
अनुसन्धानले धेरै पुरुष-हरुलाई महिलाहरु का-मुक लाग्ने देखाएको छ । तर महिलाहरुले भने पुरुषमा यस्तो कुनै का’मुक’ता देख्दैनन् । अनुसन्धानका क्रममा १ हजार जना महिलाको अन्तरवार्ता समेत लिइएको थियो, जसमा महिलाहरुले आफ्नो पुरुष यौ-नसा’थी सँग ओ’छ्यान त’ताउने विभिन्न सयौँ कारण बताएका थिए ।
एकजना महिलाका अनुसार उनले आफुमा आध्यात्मिक भावनाको विकाश गर्नका लागि लो’ग्नेसँग स-म्भोग ग’र्छिन् । से-क्सले इश्वरलाई निकै नजिकबाट महसूस गराउने दाबी उनको छ । अर्की एक महिलाले भने आफ्नो टा’उको दु’ख्ने स’मस्या वा माइ’ग्रेनबाट मु’क्ति पाउनका लागि से-क्स गर्ने गरेको बताएकी छिन्
८४ प्रतिशत महिलाले आफ्नो वैवाहिक जिवन तथा घर संसारलाई टि’काउन र शान्ति कायम राख्नका लागि नै स’म्भोग ग’र्ने गरेको बताएका छन् । केही महिलाका स’म्भोग ग’र्ने कारण निकै वि’चित्र थिए । कतिले पुरुषप्रति द’या जा’गेर स’म्भोग गरेको बताए भने कतिले आफ्नो स्वा’र्थपूर्तिका लागि सम्भो’गको उपयोग गरेको बताए- पैसा वा बहुमुल्य वस्तु हासिल गर्न ।
सर्भेक्षणमा सहभागी मध्ये १० जना महिलाले पुरुषबाट उपहार लिएको, डिनरमा खर्च गरेको वा केही किनिदिएका कारण त्यसको पैँचो तिर्न स-म्भोग गरेको बताए । कतिले आफ्नो यौ’निक प्र’दर्शन सुधार गर्न तथा यौ-न सीप बढाउन समेत स’म्भोग गरेको बताएका छन् ।
सर्भेक्षणमा सहभागी मध्ये ६० प्रतिशत महिलाले आफुले यस्तो केटासँग पनि स’म्भोग ग’रेको स्विकार गरे जो आफ्नो ब्वा’यफ्रेड थिएन ।अध्ययनबाट यो कुरा पनि पत्ता लागेको छ की महिलाहरुले अग्लो, दम’दार आवाज भएको तथा जिउबाट लठ्ठा’उन बास’ना आउने पुरुषतर्फ आकषिर्त हुन्छन् । -एजेन्सी
थप समाचार- स्वस्तिमा र केकीको फड्कोः अमेरिकी फिल्ममा अभिनय गर्दै
चलचित्र उद्योगमा निकै रुचाइएका नायिकाहरू स्वस्तिमा खड्का र केकी अधिकारीले अंग्रेजी फिल्ममा अभिनय गर्ने अवसर पाएका छन्। अहिलेसम्म नाम सार्वजनिक नगरिएको अमेरिकी चलचित्रका लागि उनीहरू आधिकारिक रूपमा अनुबन्धित भइसकेका छन्।
लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि नै अडिसनमार्फत उनीहरूलाई छनोट गरिएको हो। केही समयअगाडि नेपाल आएको फिल्मको टिमले अडिसनबाट स्वस्तिमा र केकीलाई छनोट गरेको हो। यो फिल्मका लागि अन्य केही नायिकाले पनि अडिसन दिएका थिए तर उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ।
स्वस्तिमा र केकीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर यो भूमिका पाएको बताइएको छ। फिल्मको मुख्य भूमिकामा स्वस्तिमा हुनेछिन् भने उनकी दिदीको भूमिकामा केकी रहने बताइएको छ। यी दुईबाहेक अन्य कलाकार भने अमेरिकी नै हुने छन्।
को’रोना त्रा’स सकिएपछि यसको छायांकन सुरु गरिने बताइएको छ। फिल्मको छायांकन अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा हुनेछ।
भुटानी श’रणार्थीको विषयमा बन्न लागेको उक्त अमेरिकी फिल्म अमेरिकी निर्माताले बनाउन लागेका हुन्। यसका लागि दुई महिनाअघि उनीहरू नेपाल आएर अडिसन लिएका थिए। यो फिल्म भुटानी श’रणर्थीको जीवन गाथामा आधारित हुनेछ। स्वस्तिमाले फिल्मका लागि औपचारिक रूपमा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिइन्। अमेरिकी फिल्ममा काम गर्न छनोट हुनु खुसीको कुरा भए पनि को’रोनाको त्रा’सले खुसी बाँड्न नपाएको उनको भनाइ छ। ‘यो अवसरले मलाई अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न हौसला थपेको छ।